Uyisebenzisa kanjani ifanitshala yangaphandle yegadi ngaphakathi - Indawo Yokugcina Izinto
Uyisebenzisa kanjani ifanitshala yangaphandle yegadi ngaphakathi
Amaziko eGadi yaseWyevale
Kulula kunokuba ucinga ukucima imigca phakathi kwangaphakathi nangaphandle. Sele siyazi ngokuzisa ngaphandle izityalo (kwaye kokukhona kungcono, sithi), kodwa sihlala silibale ukuba g Ifanitshala ye-arden ayifanelanga ukuba ibekelwe umyezo kuphela
izimvo zegumbi lemidlalo
Ifanitshala yeRattan ngokukodwa ilungele oku, kwaye intle ilungele ukuba imozulu ngaphandle ayifudumali njengoko kufanelekile, okanye xa ubusika buqala ukungena.
UHayley Thornton, intloko yekhaya kunye nokuzonwabisa e Amaziko eGadi yaseWyevale , inika inkuthazo ...
Ifanitshala yeRattan ubhetyebhetye kakhulu; ilungele ukusetyenziswa ngaphakathi nangaphandle ngoko ke kufanelekile ukuba utyale imali kwiseti enje, njengoko inokusetyenziswa unyaka wonke. Indawo yokugcina izinto okanye izindlu zasehlotyeni zilikhaya elifanelekileyo kule nto, ukuziva ngathi ungaphandle nangona ungekho!
iintyatyambo zokutyala ngoku
Xa imozulu ingaphantsi kokugqibeleleyo, ezi ziqhuma zikhulu zithambile zikulungele ukusetyenziswa ngaphakathi kwaye zikuvumela ukuba utshintshe kancinci kuwo onke amaxesha onyaka, wenze elona thuba langaphandle ngaphandle kwakho nokuba awukwazi ukuhlala kulo!
I-rattan emhlophe yokuhlamba kunye neziqhoboshi ezikhaphukhaphu zenza imeko ethambileyo, ke sikhethe ukwamkela iipastile zokujonga. Iipinki ezithambileyo kunye neblues zenza uzolo luhleli ngokugqibeleleyo ecaleni kwale seti intle ingwevu ipholileyo.
iyeza leempukane zeziqhamo
Iseti yeHarlestone Lounging, i- £ 799 [iseti epheleleyo ayiboniswanga], iyafumaneka kwi Amaziko eGadi yaseWyevale
itreyini engaphantsi komhlaba kwimvula
umhlobiso wekrisimesi weklasikhi
Uyilo lokuhlambela kwiindawo ezincinci
Imibono yethayile yangasese yangasese